နေပြည်တော်ရှိ Mt. Pleasant Hotel ရေကူးကန် / ဧရာဝတီ
By ထက်နိုင်ဇော်7August 2019
နေပြည်တော်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် ဟိုတယ် အလုံးပေါင်း ၆၅ လုံး ရှိပြီး ၎င်းတို့အထဲမှ ၄၈ လုံးသာ ဆက်လက် လည်ပတ် နေနိုင်သော်လည်း အများစုမှာ နှစ်စဉ် အရှုံးနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ဟိုတယ်လုပ်ငန်း ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသူများက ဧရာဝတီသို့ ပြော သည်။
နေပြည်တော်ရှိ ဟိုတယ်များသည် ဧည့်သည် အဝင်နည်းသဖြင့် အပြိုင်အဆိုင် ဈေးလျော့ရောင်းကြရာ ဥပမာအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန် အခန်းတခုကို ဒေါ်လာ ၅၀ လောက်အထိ ဈေးလျော့ရောင်းနေရသဖြင့် ဟိုတယ်များ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ရေး အခက်အခဲများ ရှိနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (နေပြည်တော်ဇုန်) ဥက္ကဌ ဦးသန်းထွဋ်က ပြောသည်။
အခြားနိုင်ငံများ ဖြစ်သည့် စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့ကို ကြည့်ပါက မည်သည့်နိုင်ငံ ဖြစ်စေ ပွဲလမ်းသဘင်များ ရှိပါက ဟိုတယ်ဈေးနှုန်းများကို ဈေးတင်ရောင်းသော်လည်း နေပြည်တော်တွင် ပွဲလမ်းသဘင်များ ရှိပါက ဈေးလျော့ပေးနေရသည် ဟု ၎င်းက ပြောပြသည်။
“ကျနေ်ာတို့ဆီမှာ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။ အဲလိုရက်ကျမှ ဈေးချပေးရမယ်။ ဘယ်လိုမှ မကိုက်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ ဥပမာ Lunch ကျွေးခိုင်းတာ။ တချို့ဆို ဒင်နာပါ ထည့်ခိုင်းတာတွေ ရှိတယ်။ တခါတလေ အဆင်ပြေပေမယ့် အမြဲတန်းဆိုရင် ဒီဟိုတယ်တွေရဲ့ Sustainable ဖြစ်ဖို့ဟာက သိပ်တော့မလွယ်ဘူး”ဟု နေပြည်တော်ဇုန် ဥက္ကဌ ဦးသန်းထွဋ်က ရှင်းပြသည်။
နေပြည်တော် ဟိုတယ်များတွင် အဆင်ပြေသည့် ဟိုတယ်ဆိုသည်မှာ အရှုံးနည်းသည့် ဟိုတယ်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အရှုံး အနည်းဆုံးဟိုတယ်မှာ တလလျှင် သိန်း ၅၀ ခန့် ရှုံးနေပြီး ဟိုတယ်ကြီးပါက သိန်း ၁၀၀ နှင့်အထက် ရှုံးလျက်ရှိကြောင်း နေပြည်တော်ရှိ အခန်း ၇၀ ခန့် ရှိသော ဟိုတယ်တလုံးတွင် မန်နေဂျာ တာဝန်ယူထားသူ ကိုနောင်နောင်က ပြောသည်။.
“နေပြည်တော်မှာ အဆင်ပြေတာ ဟိုတယ် ၇ လုံး ၈ လောက်ပဲ ရှိတယ်။ သူတို့တွေက ပွဲတွေ လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့ ဟိုတယ်တွေ အ ဆင်ပြေတယ်။ အရှုံးနည်းတာပေါ့။ ဥပမာ ကျနော်တို့ အခန်း ၇၀ ရှိတယ်ဆိုရင် ပျမ်းမျှ ၁၀ ခန်း ဝန်းကျင်လောက်ပဲ သွားတယ်။
ပုံမှန်ဆိုရင် တလကို သိန်း ၄၀၊ ၅၀ လောက် ရှုံးနေတယ်”ဟု ၎င်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
၎င်းက ဆက်၍ “ဟိုတယ်ကြီးရင် ကြီးသလောက် ရှုံးတယ်။ ကျနော်တို့ဆိုရင် မီတာတွေ Watt တွေ လျော့ထားတော့ မီတာခ ၁၅ သိန်း၊ သိန်း ၂၀ လောက်ပဲ ကျတော့တယ်။ ဟိုတယ်ကြီးတွေကျတော့ သိန်း ၇၀၊ ၈၀၊ ၁၀၀ အဲလို ကျတယ်။ ဒီမှာ အဓိက ပေးရမှာ မီတာခ၊ ဝန်ထမ်းစရိတ်၊ နောက်တခု ဝန်ထမ်းလစာ၊ နောက်အင်တာနက်ကြေးတွေက မဖြစ်မနေ သွင်းရတဲ့ ဟာတွေပါ”ဟု ပြော သည်။
နေပြည်တော်တွင် နိုင်ငံခြားငွေနှင့် ရောင်းချသည့် ကျောက်မျက် ရတနာပွဲများ မရှိပါက အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်းများ၊ အစိုးရ မဟုတ် သည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အဖွဲ့ အစည်းများက ပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားများ၊ အစည်းအဝေးများကိုသာ အဓိကထား၍ အားကိုး နေရသည်။
နေပြည်တော်တွင် ဟိုတယ်ဇုန် ၂ ခု ရှိရာ ဇုန် ၁ နှင့် ဇုန် ၂ ဟု ခေါ်ဆိုလေ့ရှိပြီး ဟိုတယ်ဇုန် ၂ မှာ ဟိုတယ် အများစုမှာ လုံးဝ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း မရှိသလို တချို့ ဟိုတယ်များမှာ ဆက်လက် မဆောက်လုပ်တော့ပဲ ရပ်ဆိုင်းထားသည်ကို တွေ့ ရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေသည် နေပြည်တော်ကို အုပ်ချုပ်ရေး မြို့ တော် အင်္ဂါရပ်နှင့်ညီအောင် ဟိုတယ်ဇုန် အကောင်အထည် ဖော်လိုသည့်အခါ ယင်းခေတ်အခါက ခရိုနီ သူဌေးကြီးများက လူကြီးခိုင်းပါက အလုပ်ပြီးစီးသည်ကို ပြလိုသည့် သဘောဖြင့် ရှုံးခြင်း မြတ်ခြင်းကိုပဲ မကြည့်တော့ဘဲ လုပ်ငန်းဖြစ်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသော ဟိုတယ် လုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောသည်။
“တချို့ ဟိုတယ်တွေဆိုရင် ရပ်ထားရတယ်။ ဟိုတယ်ဇုန် ၂ က ပိုဆိုးတာပေါ့။ ဆက်ပြီးတောင် မဆောက်ကြတော့ဘူး။ ဟိုတယ် တခုကို အခန်း ၄၀ လောက် မရောင်းရဘူးဆိုရင် ရှုံးမှာပဲ။ ကျောက်မျက်ပွဲ မရှိရင် အစိုးရက လုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးပွဲတွေလောက်ပဲ ရှိတော့ အဲဒါတွေ မရှိရင် ဘယ်လိုမှ အမြတ်မရနိုင်ဘူး။ တချို့ ဟိုတယ်တွေဆိုရင် အဆောင်လိုက် ပိတ်ထားရတာ”ဟု ယင်း လုပ် ငန်းရှင်းက ပြောပြသည်။
သို့သော် နေပြည်တော်တွင် ဟိုတယ် ပိုင်ဆိုင်ထားသူများသည် ယင်းဟိုတယ် လုပ်ငန်းတခုတည်းကို လုပ်ကိုင်နေသူများ မဟုတ်ကြပေ။
ဥပမာအားဖြင့် နေပြည်တော်ရှိ အိုအေစစ် ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် ဦးဝင်းအောင်တွင် အခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများစွာ ရှိနေသလို ရွှေဧည့်သည် ဟိုတယ်ကို ရွှေသံလွင်မှ ဦးကျော်ဝင်း၊ ရွှေစံအိမ် ဟိုတယ်ကို ဦးတေဇ၊ Horizontal Lake View ဟိုတယ်ကို ဦးထွန်းမြင့်နိုင်၊ သင်္ဂဟနှင့် Hilton ဟိုတယ်ကို ဦးချစ်ခိုင်၊ Max နှင့် M-Gallery ဟိုတယ်ကို ဦးဇော်ဇော်၊ အမရာ ဟိုတယ်ကို ဦးအောင်သောင်း၏ သားများက ပိုင်ဆိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခင် အစိုးရများက နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုန် စည်ကားလာအောင် MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) is nice ဟု အမည်တပ်ကာ နေပြည်တော်တွင် ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ပွဲအခမ်းအနားများ ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပြီး ငွေရှာရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း အောင်မြင်မှု မရခဲ့ကြောင်း ဟိုတယ် လုပ်ငန်းရှင်အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောသည်။
နေပြည်တော်သို့ လာရောက်ကြသူများတွင် စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်ရန် အကြောင်းပြုလာရောက်သူ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ အစိုးရနှင့် ဆက်စပ်ပြီး လာကြသည့် NGO ဝန်ထမ်းများလည်း ရှိကြောင်း၊ သို့သော် Travel Agent နှင့် လာသည့် ဧည့်သည်က ၄ ရာခိုင်နှုန်း အောက်တွင်သာ ရှိကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော်သို့ ခရီးသွားဧည့်သည်များ လာချင်အောင် အခြေအနေမျိုး ဖန်တီးပေးရန် လိုကြောင်း၊ နေပြည်တော်ရှိ လည်ပတ်စရာများကိုလည်း ပြောပေးခြင်းဖြင့် ခရီးသွားကဏ္ဍကို မြင့်တင်ရန် လိုကြောင်း၊ တပ်မတော် အစိုးရက ယခု နေရာကို အပြောင်းအလဲ လုပ်ပေးခဲ့သဖြင့် တချို့က နေပြည်တော်ကို လည်ပတ်စရာနေရာဟု မသတ်မှတ်ကြောင်း နေပြည်တော်ဇုန် ဥက္ကဌ ဦးသန်းထွဋ်က ပြောသည်။
ဟိုတယ် မန်နေဂျာတဦး ဖြစ်သူ ကိုနောင်နောင်ကလည်း “ခရီးသွားကလည်း ဒီမှာက ရုံးပုံစံနဲ့ပဲ သွားကြတာ များတယ်။ နိုင်ငံခြားသား စိတ်ဝင်စားမယ့် နေရာက မရှိဘူးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ရှိတယ်။ တချို့ နေရာတွေကလည်း Safe မဖြစ်ဘူး။ ရေပူစမ်းသွားမယ်ဆိုလည်း အဲဒီရေက သန့်လား၊ မသန့်လား မသိဘူး။ အခုရှိတာလေးတွေကို ဆွဲဆောင်မှု ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ တဖက်တလမ်းက အထောက်အကူ ဖြစ်လာမှာ”ဟု ပြောပြသည်။
နေပြည်တော်တွင် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများ အခြေအနေမကောင်းသဖြင့် အကျိုးဆက်မှာ ဟိုတယ်တွင် လုပ်ကိုင်နေရသည့် ဝန်ထမ်း များသည်လည်း ၎င်းတို့ ရသင့်ရထိုက်သည့် လစာ၊ ခံစားခွင့်များ မရရှိတော့ကြောင်း၊ ဟိုတယ်က ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းကောင်း ပေးသလို ထိုက်တန်သည့် အခကြေးငွေ ပြန်ယူမှသာလျှင် ဝန်ထမ်းများကိုလည်း လစကောင်းကောင်း ပေးနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း သင်္ဂဟဟိုတယ်၏ ဒါရိုက်တာတဦး ဖြစ်သူ ဦးသန်းထွဋ်က ပြောသည်။
“ထိုက်တန်တဲ့ အခကြေးငွေ ပြန်ယူမှ ဝန်ထမ်းကလည်း လခကောင်း ကောင်းရမယ်။ လခကောင်းကောင်းရမှ သူ့ရဲ့မိသားစုက စား ဝတ်နေရေး ပြေလည်ပြီး ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖွံ့ ဖြိုးဖို့ အတွက်ရော သူ့မိသားစုအတွက်ကို ပြန်သုံးနိုင်မှာပေါ့နော်။ မဟုတ် ရင် ကြာလို့ ရှိရင် လူနေမှု အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားလိမ့်မယ်”ဟု ၎င်းက ထောက်ပြသည်။
နေပြည်တော်ရှိ ဟိုတယ်များသည် ၂၀၁၃ အရှေ့ တောင်အာရှ အားကစားပွဲတော် (ဆီးဂိမ်း)နှင့် အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ ရာထူး လွှဲပြောင်း ပေးပြီးနောက်ပိုင်း ၂၀၁၅ နှစ်အလယ်ပိုင်းကစပြီး ဧည့်သည်အဝင် ဆက်တိုက် လျော့ကျလာသည်မှာ ယနေ့ အချိန်အထိဖြစ်သလို အမြတ်မကျန်ဘဲ နှစ်စဉ် အရှုံးများနှင့်သာ ရင်ဆိုင်နေရပြီး ဝန်ထမ်းစရိတ် ကြေရန်သာ ဆက်လက် ရှုံးကန်နေရဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Topics: နေပြည်တော်, ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများ